Somali daily News – Ciidamo Dowlada ka tirsan oo maanta dhac ka gaystay Jaamacada Simad
Ciidamo Dowlada ka tirsan oo maanta dhac ka gaystay Jaamacada Simad
dr.yare November 28, 2016 0
(XAMARWEYNE.COM):-Ciidamo ka tirsan kuwa Dowlada Soomaaliya ayaa maanta xoog ku galay Jaamacada SIMAD ee wadada warshadaha ku taal halkaasoo ay dhac ka gaysteen.
Ardey ka mid ah Jaamacada oo la hadlay Website-kaan ayaa noo sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday uu ka hortagay mid ka mid ah ilaalada Jaamacada kaasoo watay baastoolad oo kaliya, laakiin rasaastu ka go’aday markii danbe.
Wuxuu tilmaamay in ciidamadii Dowlada ee weerarka soo qaaday ay soo galeen Jaamacada sidaasna ku qaateen qaar ka mid ah kumbuutaro ay wateen ardeyda ,sidoo kale wuxuu sheegay inay jir dileen ninkii ilaalada u ahaa Jaamcada ee rasaastu ka dhamaatay.
“waxay dheheen waxaad tahay alshabaab kadibna waxay jir dileen ninkii ilaalada noo ahaa ,qaar ardeyda ka mid ah ayaa ku cabaaday iska daaya ha dilina mar ayba damceen inay xabad ku dhuftaan”ayuu yiri ardeyga noo waramay.
Ugu danbeyn ardeygaan wuxuu sheegay in ciidamo ka socda nabad sugida Dowlada ay goobta soo gaareen markaasoo ay sooo qabteen kooxihii dhaca gaystay islamarkaana ay ka soo celiyeen agabkii ay dhaceen kadibna ay indhaha ka xireen.